खुल्यो रहस्य : बाँस्कोटा फसेको सेक्युरिटी प्रेसमा देखियो विद्या भण्डारी, केपी ओली, विष्णु पौडेलसम्मको हात…हेर्नुहोस !
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दिनअघि मात्रै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको गृहजिल्ला पुगेर उनको भरपुर प्रशंसा गरेका थिए ।
ओलीको भनाइ थियो, ‘काभ्रे प्रतिभा जन्माउने ठाउँ हो । यो कुरा क्रमशः प्रकट हुँदै गएको छ । आज देशमा राजनीतिक तुलोमा राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा र अर्काेतिर अरू सबैजस्तो हुन्छ । सरकारको वि,रोध गर्नुपर्‍यो भने गोकुल बाँस्कोटातिर हेर्नेबित्तिकै चुप्प लाग्ने अवस्था छ ।’
मन्त्री बाँस्कोटा र यती होल्डिङ्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रूपसँग डिल गर्न सँगै पेरिस जाने तयारीमा थिए तर अघिल्लो १५ फागुनमा पाथीभरामा हेलिकोप्टर दु,र्घटनामा शेर्पाको नि,धन भएपछि बाँस्कोटा सरकारी कर्मचारीसँग फ्रान्स पुगेका थिए ।
२०७३ बैशाख २६ गते राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलोपटक विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा १३८ बुँदा थिए, जसको १०९ औं बुँदामा उल्लेख थियो – ‘सु,रक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानूनमा सुधार गरी सुरक्षण मु,द्रण कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरू गरिने छ ।’
देशमा सुरक्षण मु,द्रण (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदा सांसदहरूले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए । यो घोषणा सेक्युरिटी प्रेस बे,चबिखन गर्ने विदेशी कम्पनीका एक जना एजेन्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न लगाएका थिए भन्ने टेबुल ठोक्ने सांसदहरूलाई हेक्का पनि थिएन ।
आफ्नो ‘स्किम’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्न सफल स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्र भन्छन्, ‘सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सकिन्छ र सबैलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कन्भिन्स गरें, त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा यो ‘स्किम’ परेको हो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
तर नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न नपाउँदै २०७३ साउन २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । उता ‘स्किम’ बनाएका स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए । ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७४ फागुन ३ गते सिंहदरबार फर्किएपछि मिश्र आफ्नो कारोबार हुनेमा ढुक्क भएका थिए । विभागीय मन्त्रालय भएकाले उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग संवाद अगाडि बढाए । त्यही संवादको क्रममा मन्त्री बाँस्कोटा स्विस कम्पनी मात्र होइन, जर्मन कम्पनी भेरिडोस र पे्रmन्च कम्पनी आइएन ग्रूपसँग पनि बार्गेनिङमा छन् भन्ने मिश्रले थाहा पाए । त्यसैले उनले ह,तियारका रूपमा बाँस्कोटासँगको प्रत्यक्ष संवाद आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गरे । त्यही रेकर्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ ।
रेकर्डअनुसार २५ अर्बमा प्रेस खरिद भएमा ७४ करोड कमिसन आउने र ५५ करोडसम्म क,मिसन दिन मिश्र तयार भएका छन् । तर मन्त्री बाँस्कोटाले २५ अथवा २७ को सट्टा २८ अर्बको प्याकेज बनाउन र क,मिसन बढाउन एजेन्टलाई आग्रह गरेको रेकर्डमा प्रस्ट सुनिन्छ ।
यो रेकर्ड गरेपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्रले आफूलाई बलियो ठानेका थिए । तर यसको हेक्का नभएका मन्त्री बाँस्कोटा भने प्रक्रियाका रूपमा जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीलाई कागजी रूपमा भिडाएर औपचारिक रूपमा फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा लागिसकेका थिए । किनकि यो कारोबारमा यती समूह प्रवेश गरिसकेको थियो ।
सुरूमा जर्मन कम्पनीले नोटसमेत छाप्ने प्रेसका लागि ३७ अर्ब ८३ करोड र फ्रेन्च कम्पनीले ३८ अर्ब ४७ करोडको प्रस्ताव गरेका थिए । तर यी कम्पनीबाट ‘फुल प्याकेज’को होइन, नोटबाहेक अरू सामग्री छाप्ने गरी ‘सस्तो प्याकेज’को तयारीमा सरकार लागेको थियो । यसका लागि भएको मिलिभगतअनुसार जर्मन कम्पनीको २३ अर्ब ७० करोड र फ्रेन्च कम्पनीको २३ अर्ब ९ करोडको कोटेसन मागिएको थियो । दुई कम्पनीबीच मिल्दोजुल्दो प्याकेज मागेर फ्रेन्च कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको तयारी थियो । तर यो सस्तो प्याकेज ११ अर्बमा दिने भन्दै स्विस कम्पनीका एजेन्ट मिश्र पनि मन्त्रीको पछि लागिरहेका थिए । मिश्रले लेखा समितिमा उपस्थित भएर पनि यस्तो बयान दिइसकेका छन् ।
उता महंगो भएपनि यती होल्डिङ्सलाई ठेक्का दिन सरकार निश्चित भइसकेको थियो । यसका लागि फ्रेन्च कम्पनी आइएन ग्रूपको नेपाल एजेन्ट यती होल्डिङ्सका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा र मन्त्री बाँस्कोटा सँगै पेरिस जाने तयारी भएको थियो । शेर्पा पाथीभरामा सरकारबाट सित्तैमा लिएको जग्गामा केबलकार चलाउने तयारीमा पनि थिए ।
त्यही परियोजना हेर्न उनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि लिएर १५ फागुनमा पाथीभरा पुगेका थिए । त्यो दिन मौसम धेरै नै ख,राब थियो । तर बेलुका नै मन्त्री बाँस्कोटासँग युरोप उड्ने तयारी भएकाले शेर्पाको जोडबलमा पाथीभराबाट हेलिकोप्टर उडेको थियो । तर दु,र्भाग्य ! केही मिनेटमै हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो, मन्त्री अधिकारी र शेर्पा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव युवराज दाहालसहित ७ जनाको मृ,त्यु भयो ।
दु,र्घटनामा शेर्पाको नि,धन भएपनि मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप यात्रा रोकिएन । उनी फ्रेन्च कम्पनीसँग ‘डि,ल’ गर्न हिँडेको थाहा पाएपछि स्विस कम्पनीका एजेन्ट पनि पछिपछि पेरिस पुगेका थिए । उनीहरू सँगै एउटै गाडीमा फ्रान्सबाट स्विट्जरल्यान्डसम्म पुगेका थिए । तर मन्त्री बाँस्कोटाबाट आफ्नो व्यापारिक चासो पूरा नहुने भएपछि निराश भएका मिश्रले नेपाल आएपछि सरकारलाई ध,म्क्याउन थाले । यसबीचमा करीब एक वर्ष उनले कहिले फकाएर, कहिले ध,म्क्याएर सरकारलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरे । सँगै उनले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उ,जुरी दिए ।
समितिले उनलाई विज्ञका रूपमा बोलाएको थियो । जहाँ उनले भने, ‘११ अर्बको प्रेस २३ अर्बमा खरिद गर्ने प्रक्रिया हुँदैछ, भ्र,ष्टाचारको छानबिन गरिपाऊँ ।’
लेखा समितिमा मिश्रले बयान दिएपछि सत्तारुढ दलभित्र पनि हलचल भयो । त्यसबीचमा उनले आफ्ना पुराना शुभचिन्तक तथा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेर मन्त्री बाँस्कोटासँगको अडियो संवाद पनि सुनाएका थिए । अडियो सुनाउन गत २२ पुसको राति ८ः३० बजे मिश्र पौडेलनिवास भैंसेपाटी नै पुगेका थिए ।
‘सरकारले सोच्न सक्छ भनेर मैले विष्णु पौडेललाई अडियो रेकर्ड दिएको हुँ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँछु र खबर गर्छु भन्ने वचन दिनुभएको थियो ।’ अडियो सुनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट मिश्रले सकारात्मक जवाफ पाएनन् । बरु यसबीचमा सार्वजनिक लेखा समितिका पदाधिकारी र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री र मिश्रको बार्गेनिङको अडियो रेकर्ड सुनिसकेका थिए । तर यस विषयमा बे,खबरजस्तै बनेर पुस २८ गते प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बाँस्कोटालाई सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिए । त्यसपछि आफ्नो व्यापारिक चासो पनि स,म्बोधन नहुने भएपछि मिश्रले आपूmसँग भएको ‘अडियो अस्त्र’ प्रयोग गरेका छन् ।
ओलीको बोलीमा ठेगान छैन, कुतर्क मात्रै गर्छन् :तेस्रो धारका नेताहरु भन्नुहुन्छ !
प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पारित गर्न खोजे कुर्सीबाटै हटाउछौ :भन्नुहुन्छ देव गुरुङ
पतन भए माधव नेपाल, सत्ताका लागि आफ्नैलाई लात हाने ।
माधब नेपालको पार्टीले हात पार्‍¥यो ठूलो सफलता…हेर्नुहोस।
भीम रावल र बादलले गरे एमाले अधिवेशन बहिस्कार गरे!
एमालेलाई सिकाइन देश बिकास गर्ने तरिका : रामकुमारी झाक्री